မာရှယျ ပွနျလာပွီ ဆိုခွငျးနဲ့ အတူ နောဝှဈချြ 1 –3ယူနိုကျတကျ ပှဲစဉျ မှ မှတျသားဖှယျ အခကျြ5ခကျြ - SPORTS MYANMAR
မာရှယျ ပွနျလာပွီ ဆိုခွငျးနဲ့ အတူ နောဝှဈချြ 1 –3ယူနိုကျတကျ ပှဲစဉျ မှ မှတျသားဖှယျ အခကျြ5ခကျြ
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ မနေ့ ညက အဝေးကှငျးမှာ နောဝှဈချြ အသငျး နဲ့ ရငျဆိုငျ ကစား ခဲ့ ရပွီး 1 –3ဆိုတဲ့ ရလဒျ နဲ့ အနိုငျယူ နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါဟာ ဒီ ရာသီ အတှကျ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ ပရီးမီးယား လိဂျ ပထမဆုံး အဝေးကှငျး နိုငျပှဲ ဖွဈခဲ့ သလို ပထမဆုံး နှဈပှဲဆကျ အနိုငျရ ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ လညျး ဖွဈသှား ခဲ့ရ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ မှာ ယူနိုကျတကျ အတှကျ အဖှငျ့ဂိုး သှငျးယူ ပေးသှား နိုငျ ခဲ့တဲ့ တျောမီနေး ရဲ့ ကနျခကျြ က အသငျး ရဲ့ သမိုငျး တဈလြောကျ သှငျးဂိုး 2000 ပွညျ့သှား စတေဲ့ ဂိုးပဲ ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။ အဲ့ဒီနောကျ ရပျရျှဖို့ ဟာ ပငျနယျတီ ရရှိ ခဲ့ ပမေယျ့ တငျ ခရူးလျ က ကာကှယျ သှားနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ အဲ့ဒီနောကျ မကွာမီမှာပဲ ရပျရျှဖို့ ဟာ အသငျး အတှကျ ဒုတိယ မွောကျ ဦးဆောငျ ဂိုးကို သှငျးယူ ပေးသှား နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
အဲ့ဒီနောကျ ယူနိုကျတကျ တို့ နောကျထပျ ပငျနယျတီ ကနျသှကျးခှငျ့ ကို မာရှယျ က တာဝနျ ယူသှား ခဲ့ ပမေယျ့ တငျ ခရူးလျ က ဆကျလကျ လကျစှမျး ကောငျး ပွသ သှားနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒုတိယ ပိုငျးမှာ မာရှယျ က အသငျး အတှကျ တတိယမွောကျ ဦးဆောငျဂိုး ကို သှငျးယူ ပေးသှား နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
နောကျဆုံး မှာတော့ အိမျရှငျ အသငျး အတှကျ ဟာနနျဒကျဈ က ဂိုး သှငျးယူ ပေးသှား ခဲ့တဲ့ နောကျ ပှဲစဉျ က 1 –3ဆိုတဲ့ ရလဒျ နဲ့ ပွီးဆုံး သှားခဲ့ ရ ပါတယျ ။ ဒီနေ့ ပှဲစဉျ မှာ ယူနိုကျတကျ အသငျး အတှကျ ရလဒျ နဲ့ အတူ အထူး ဝမျးသာ စရာ ဖွဈစေ ခဲ့တာက မာရှယျ ၊ ရပျရျှဖို့ ၊ ဂြိမျးဈ တို့ရဲ့ တှဲလုံး တှနေဲ့ အဖကျဖကျ မှ တိုးတကျ ကောငျးမှနျ လာတဲ့ အသငျး ရဲ့ ကစားဟနျ ပါပဲ ။
ဒါ့အပွငျ ဒီ ရာသီ ခွစှေမျးပိုငျး အရ အားရ စရာ မရှိ ခဲ့တဲ့ ဖရကျဒျ နဲ့ ပါရဲရား တို့က ကြှနျတျော တို့ ဘရာဇီးသား တှပေါ ဆိုတာကို ခွစှေမျး နဲ့ သကျသေ ပွသှား ခဲ့ခွငျး ကလညျး ပေါ့ဂျဘာ မပါဝငျ နိုငျတဲ့ ယူနိုကျတကျ ကှငျးလယျ အတှကျ အနညျးငယျ စိတျအေး စရာ ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ မှ မှတျသားဖှယျ အခကျြ5ခကျြကို ဖျောပွ ပေးလိုကျ ပါတယျ ။
(1) မာရှယျနဲ့ အတူ ပုိုကောငျးတဲ့ ရလဒျတှကေို မြှျောလငျ့နိုငျခှငျ့ ရှိနမေယျ့ ဆိုးလျရှား
ဒဏျရာ မှ ပွနျလညျ သကျသာ ကောငျးမှနျ လာ ခဲ့တဲ့ မာရှယျ ဟာ ယူနိုကျတကျ တို့ လီဗာပူး နဲ့ ရငျဆိုငျ ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ မှာ လူစားဝငျ ကစားသမား အဖွဈ စတငျ ပါဝငျခှငျ့ ရရှိ ခဲ့ ပါတယျ ။ အဲ့ဒီနောကျ ပါတီဇနျ ဘဲလျဂရိတျ အသငျး နဲ့ ပှဲမှာ သူဟာ အသငျး ရဲ့ ပှဲထှကျ ကစားသမား အဖွဈ ပါဝငျ ခဲ့ပွီး ပငျနယျတီ မှ တဈဆငျ့ အသငျး အတှကျ တဈလုံး တညျးသော အနိုငျဂိုး ကို တညျတညျ ငွိမျငွိမျ ကနျသှငျး သှားနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒီနေ့ ပှဲစဉျ မှာတော့ ယူနိုကျတကျ တို့ လူစုံ နီးပါး ပါဝငျ နိုငျခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ မှာ မာရှယျ ဟာ ပငျနယျတီ လှဲခြျော ခဲ့ပမေယျ့ ရဲ့ လုပျအား တှနေဲ့ ပွိုငျဖကျ ခံစဈ ကို ဒုက်ခ ပေးခဲ့ မှုတှေ အပွငျ အနိုငျ သခြော စမေယျ့ သှငျးဂိုး က ယူနိုကျတကျ အတှကျ အရမျး ကို အရေးပါခဲ့ ပါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ သူ အသငျး အတှကျ ပွနျလညျ ပါဝငျ ကစားပေး ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ ကတညျးက ယူနိုကျတကျ တို့ ဆကျတိုကျ ရလဒျ ကောငျးမှနျ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။
သူဟာ ဒီ ရာသီ မှာ ယူနိုကျတကျ အတှကျ နံပါတျ9အဖွဈ ကစား ပေးခဲ့ ရ သလို တောငျပံ တိုကျစဈ ကစားသမား အဖွဈ လညျး ကစား ပေးခဲ့ ရ ပါတယျ ။ အဲ့ဒီလို အနအေထား မှာ သူဟာ အသငျး အတှကျ အကောငျးဆုံး ကစား ပေးရငျး တိုကျစဈ ကို ပိုကောငျး စနေိုငျ ခဲ့ သလို ပွိုငျဖကျ ခံစဈ ကို ဒုက်ခ ပေးရငျး အသငျးဖျော တှကေို လညျး ကူညီ ပေးသှား နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီ ရာသီ မာရှယျ နဲ့ အတူ ဆိုးလျရှား ဟာ ပိုကောငျး တဲ့ ရလဒျ တှကေို မြှျောလငျ့ ခငျြတယျ ဆို မြှျောလငျ့ နိုငျခှငျ ရှိနပွေီ လို့ ဆိုလို့ ရနိုငျ ပါတယျ ။
(2) ပိုတိုးလာတဲ့ ပငျနယျတီ ပွသနာ
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ ဒီ ရာသီ အတှငျး ပရီးမီးယားလိဂျ ပွိုငျပှဲ မှာ ပငျနယျတီ ကနျသှငျးခှငျ့6ကွိမျ အထိ ရရှိ ထားခဲ့ ပွီး4ကွိမျ အထိ တောငျ ဂိုး သှငျးယူ နိုငျခွငျး မရှိခဲ့ ပါဘူး ။ ယခငျ တုနျးက ယူနိုကျတကျ အတှကျ ပငျနယျတီ ကို ဂိုး အဖွဈ ရာနှုနျးပွညျ့ ပွောငျးလဲ ပေးနိုငျ ခဲ့တဲ့ ရပျရျှဖို့ ဟာ ဒီရာသီ2ကွိမျ ပငျနယျတီ လှဲခြျော ခဲ့ပွီ ဖွဈသလို ပေါ့ဂျဘာ နဲ့ မာရှယျ တို့ ဟာလညျး တဈကွိမျစီ လှဲခြျော ထားခဲ့ ကွ ပါတယျ ။
ဒီနေ့ ပှဲစဉျ မှာတော့ ပငျနယျတီ လှဲခြျော ခဲ့ခွငျး က ယူနိုကျတကျ အတှကျ အနှုတျ လက်ခဏာ မဖွဈ စခေဲ့ ပမေယျ့ ဒါကိုသာ ပိုငျပိုငျ နိုငျနိုငျ သှငျးယူ နိုငျ ခဲ့မယျ ဆိုရငျ ယူနိုကျတကျ ဟာ လကျရှိ အခြိနျ ဒီထကျ ပိုကောငျး တဲ့ အမှတျပေး ဇယား ရပျတညျ မှု အနအေထား မှာ ရှိနေ ခဲ့မှာ အသအေခြာ ပါပဲ ။
ယူနိုကျတကျ ရဲ့ မွနျဆနျ တဲ့ တိုကျစဈ ကို ဟနျ့တား နိုငျဖို့ အတှကျ ပွိုငျဖကျ အနေ နဲ့ ဖကျြထုတျမှု တှေ မလှဲမသှေ ပွုလုပျ ရမှာ ပါပဲ ။ အဲဒီ အခါ တှမှော ဖကျြထုတျ မှု မသသေပျ တာတှေ ပါဝငျ လာမှာ လညျး အသအေခြာ ပါပဲ ။ ဒါကွောငျ့ ယူနိုကျတကျ ဟာ ဒီ ကစားသမား တှကွေောငျ့ အနာဂတျ မှာ ပငျနယျတီ တှကေို ဆကျလကျ ရရှိ ဦးမှာ ပါ ။ ဒီ တာဝနျ ကို အကောငျးဆုံး ယူနိုငျမယျ့ သူက ဘယျသူလဲ ဆိုတာ ကို ဆိုးလျရှား ရှာဖှေ သငျ့နေ ပါပွီ ။
(3) အထငျကွီးဖှယျ ကောငျးခဲ့တဲ့ အာရှနျ
နောဝှဈချြအသငျးဟာ ရလဒျ တှေ ဆိုးရှား နခေဲ့ ပါတယျ ။ တနျးဆငျးဇုနျ ထဲတောငျ ရောကျရှိ နခေဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အင်ျဂလနျ U 21 ကစားသမား လေး မကျဈ အာရှနျ ရဲ့ ခွစှေမျး ကတော့ အထငျကွီး ဖှယျရာ ပါပဲ ။ သူရဲ့ ခွစှေမျး တှကေ တဈဆငျ့ ထပျတကျ နခေဲ့ ပါပွီ ။ လကျရှိ အခြိနျ မှာတော့ သူဟာ ခံစဈ အကောငျးဆုံး ကစား နိုငျဖို့ တော့ ဆကျလကျ သငျယူ ရပါ ဦးမယျ ။
ဒါပမေယျ့ သူ တိုကျစဈ ကို လိုကျပါ ကစား ပေးခွငျး က အသငျးဖျော တှေ အတှကျ အရမျး ကို အထောကျ အကူ ဖွဈစေ ခဲ့ပါတယျ ။ သူဟာ ပှဲခြိနျ နှဈပိုငျး အတှငျး မှာ အသငျး အတှကျ ကောငျးမှနျ လှနျးတဲ့ အခှငျ့အရေး ဖနျတီးမှု2ကွိမျ အထိ ပွုလုပျ သှားခဲ့ သလို ဘောလုံး ပေးပို့ ရာမှာ လညျး ဉာဏျလှား သုံးပွ ခဲ့ သလို သသေပျ မှုလညျး ရှိခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ တိုကျစဈပိုငျး ဂိုးသှငျး မသခြော ခဲ့မှုက သူ့ရဲ့ လုပျအား တှကေို ထငျပျေါ သငျ့ သလောကျ မထငျပျေါ စခေဲ့ ပါဘူး ။
ပှဲစဉျ အတှငျး အာရှနျ ကို ဟနျ့တား ဖို့ မကွာခန အခကျ ကွုံခဲ့ ရ သလို မလိုအပျတဲ့ ဖကျြထုတျ မှု အတှကျ အဝါကဒျ ပါ ရရှိ ခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျ နောကျခံလူ အကျရျှလယေနျး ကတော့ ဒီ ပှဲစဉျ အနိုငျ ရလဒျ နဲ့ အတူ ကုနျဆုံး သှားခဲ့ ရတာ ကို ပြျောရှငျ နမှော အသအေခြာ ပါပဲ ။ ထိနျးခြုပျ ဟနျ့တားရ ခကျခဲတဲ့ ပွိုငျဖကျ ကို အခြိနျ ကွာမွငျ့စှာ ရငျဆိုငျ ရခွငျး က နောကျခံလူ တှေ အတှကျ အိပျမကျဆိုး တဈခု ပဲလေ ။
(4) ခွစှေမျး နောကျတဈဆငျ့ တကျရောကျ ကွပွီ ဖွဈတဲ့ တျောမီနေး နဲ့ ဂြိမျးဈ
အကယျလို့ ယူနိုကျတကျ သာ လူငယျ စီမံကိနျး တဈခု ကို သခြောပေါကျ အကောငျအထညျ ဖျောဆောငျ နတော ဆိုရငျ အသငျး ရဲ့ အခွား လူငယျ တှေ အနေ နဲ့ တျောမီနေး နဲ့ ဂြိမျးဈ တို့ကို အတုယူ သငျ့ ပါတယျ ။ ဒီနေ့ ပှဲစဉျ မှာလညျး ဆိုးလျရှား ရဲ့ ယုံကွညျမှု တှကေို ဘာကွောငျ့ ရရှိ နကွေ သလဲ ဆိုတာ ကို သူတို့ တှကေ ပွသ ထားခဲ့ ကွတယျ လေ ။
အထူးသဖွငျ့ စကော့တလနျ လကျရှေးစငျ ဟာ ဒီ ရာသီ အတှငျး ယူနိုကျတကျ အတှကျ ပှဲစဉျ တိုငျး ထူးခွား ကောငျးမှနျ လှနျးခဲ့ပွီး ကှငျးလယျ ခံစဈ ကစားသမား တှကေို ဆုံးရှုံး ထားတယျ ဆိုတဲ့ ခံစားခကျြ တှကေို ယူနိုကျတကျ ပရိသတျ တှရေဲ့ စိတျထဲမှ ဆှဲထုကျ ထားနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒီနေ့ လညျး သူဟာ အသငျး ရဲ့ ကှငျးလယျ မှာ ဘောလုံး ကိုငျ ကစားတာ အရမျး ကို သသေပျ ကောငျးမှနျ ခဲ့ သလို အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈ ကိုလညျး အထောကျအပံ့ ကောငျးတှေ ပေးသှား နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ ကိုယျတိုငျ လညျး အသငျး အတှကျ အရေးပါလှနျး လှတဲ့ ဦးဆောငျ ဂိုးကို ကိုယျတိုငျ သှငျးယူ သှားနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
ဂြိမျးဈ ကတော့ ညာ တောငျပံ အတှကျ ကစား ပေးဖို့ ယူနိုကျတကျ ဆီ ရောကျရှိ လာခဲ့ ပမေယျ့ ဘယျ တောငျပံ မှာ ကစား တာ ပိုကောငျး ကွောငျး ပွသ သှားနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ အခုတော့ သူဟာ ညာ တောငျပံ ပွနျလညျ ကစား ပေးနေ ရပွီး ကောငျးမှနျ တဲ့ လုပျအား နှုနျးတှေ ၊ သှကျလကျ မွနျဆနျ မှု တှနေဲ့ အတူ အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈ ကို ပံ့ပိုး ပေးရငျး ပွိုငျဖကျ ခံစဈ ကစားသမားတှေ ကို အထူး ဒုက်ခ ပေးထား နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
သူဟာ ယူနိုကျတကျ ကို စတငျ ရောကျရှိ ကတညျးက အရံ ကစားသမား အဖွဈ သာ ပါဝငျ ခှငျ့ ရရှိ လိမျ့မယျ လို့ ထငျကွေး ပေးထား ခံခဲ့ ရသူ ပါ ။ ဒါပမေယျ့ သူဟာ အသငျး မှာ ပုံမှနျ ပှဲထှကျ ကစား ခှငျ့ တှကေို တျောမီနေး ၊ မကျဂှားယား နဲ့ ဒီဂီယာ တို့ နညျးတူ ရယူ ထားနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ အသငျး သဈ တဈခု ကို ရောကျရှိ လာတဲ့ အတှအေ့ကွုံ နညျးသူ လူငယျ ကစားသမား တဈယောကျ ဆီက အခြိနျ နဲ့ အမြှ ဒီထကျ ပိုပွီး ကောငျးမှနျ တဲ့ အရာ တှကေို ရရှိ နိုငျ ဦးမယျ ဆိုတာ သခြော လှ ပါတယျ ။
(5) ” 2000 ” … ကြျောလိုကျ ပါပွီ !!!
ဒီနေ့ ပှဲစဉျ မှာ ယူနိုကျတကျ အတှကျ အဖှငျ့ ဂိုး သှငျးယူ ပေးလိုကျ တဲ့ စကော့ မကျ တျောမီနေး ဟာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ သမိုငျး တဈလြောကျ 2000 အကွိမျ မွောကျ ပရီးမီးယား လိဂျ သှငျးဂိုး ကို သှငျးယူ ပေးလိုကျပွီ ဆိုတဲ့ သမိုငျးဝငျ မှတျတမျး ကောငျး တဈခု ကို ကားရိုး ရုတျဒျ ကှငျးမှာ ရေးထိုး သှားနိုငျ ခဲ့ ပါပွီ ။
အဆိုပါ သှငျးဂိုး ကွောငျ့ ယူနိုကျတကျ ဟာ ဒီ ပွိုငျပှဲ မှာ သှငျးဂိုး 2000 ပွညျ့မွောကျ သှားတဲ့ ပထမဆုံး ကလပျ အသငျး တဈခု ဖွဈသှား ခဲ့ ပါပွီ ။ စံခြိနျတှေ မှတျတမျး ကောငျးတှေ ဆိုတာ ကစားသမား တိုငျး လိုခငျြ ကွတဲ့ အရာ တဈခု ပါပဲ ။ အထူးသဖွငျ့ ယူနိုကျတကျ လို အသငျး မှာ ကစား နတေဲ့ ကစားသမား တဈဦး က ဒီလို အသငျး အတှကျ မှတျတမျး တဈခု ရေးထိုး နိုငျဖို့ ပိုပွီး စိတျအား ထကျသနျ နမှော အသအေခြာ ပါပဲ ။ အခုတော့ တျောမီနေး ဟာ စံခြိနျ တဈခု ကို ရယူ ရငျး ယူနိုကျတကျ ရဲ့ သမိုငျးဝငျ လူသား ဖွဈလာ ခဲ့ ပါပွီ ။
မာရှယ် ပြန်လာပြီ ဆိုခြင်းနဲ့ အတူ နောဝှစ်ခ်ျ 1 –3ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ် မှ မှတ်သားဖွယ် အချက်5ချက်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ မနေ့ ညက အဝေးကွင်းမှာ နောဝှစ်ခ်ျ အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား ခဲ့ ရပြီး 1 –3ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ အနိုင်ယူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ဒီ ရာသီ အတွက် ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ပရီးမီးယား လိဂ် ပထမဆုံး အဝေးကွင်း နိုင်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ သလို ပထမဆုံး နှစ်ပွဲဆက် အနိုင်ရ ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် လည်း ဖြစ်သွား ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာ ယူနိုက်တက် အတွက် အဖွင့်ဂိုး သွင်းယူ ပေးသွား နိုင် ခဲ့တဲ့ တော်မီနေး ရဲ့ ကန်ချက် က အသင်း ရဲ့ သမိုင်း တစ်လျောက် သွင်းဂိုး 2000 ပြည့်သွား စေတဲ့ ဂိုးပဲ ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီနောက် ရပ်ရ်ှဖို့ ဟာ ပင်နယ်တီ ရရှိ ခဲ့ ပေမယ့် တင် ခရူးလ် က ကာကွယ် သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီနောက် မကြာမီမှာပဲ ရပ်ရ်ှဖို့ ဟာ အသင်း အတွက် ဒုတိယ မြောက် ဦးဆောင် ဂိုးကို သွင်းယူ ပေးသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် ယူနိုက်တက် တို့ နောက်ထပ် ပင်နယ်တီ ကန်သွက်းခွင့် ကို မာရှယ် က တာဝန် ယူသွား ခဲ့ ပေမယ့် တင် ခရူးလ် က ဆက်လက် လက်စွမ်း ကောင်း ပြသ သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယ ပိုင်းမှာ မာရှယ် က အသင်း အတွက် တတိယမြောက် ဦးဆောင်ဂိုး ကို သွင်းယူ ပေးသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
နောက်ဆုံး မှာတော့ အိမ်ရှင် အသင်း အတွက် ဟာနန်ဒက်စ် က ဂိုး သွင်းယူ ပေးသွား ခဲ့တဲ့ နောက် ပွဲစဉ် က 1 –3ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ ပြီးဆုံး သွားခဲ့ ရ ပါတယ် ။ ဒီနေ့ ပွဲစဉ် မှာ ယူနိုက်တက် အသင်း အတွက် ရလဒ် နဲ့ အတူ အထူး ဝမ်းသာ စရာ ဖြစ်စေ ခဲ့တာက မာရှယ် ၊ ရပ်ရ်ှဖို့ ၊ ဂျိမ်းစ် တို့ရဲ့ တွဲလုံး တွေနဲ့ အဖက်ဖက် မှ တိုးတက် ကောင်းမွန် လာတဲ့ အသင်း ရဲ့ ကစားဟန် ပါပဲ ။
ဒါ့အပြင် ဒီ ရာသီ ခြေစွမ်းပိုင်း အရ အားရ စရာ မရှိ ခဲ့တဲ့ ဖရက်ဒ် နဲ့ ပါရဲရား တို့က ကျွန်တော် တို့ ဘရာဇီးသား တွေပါ ဆိုတာကို ခြေစွမ်း နဲ့ သက်သေ ပြသွား ခဲ့ခြင်း ကလည်း ပေါ့ဂ်ဘာ မပါဝင် နိုင်တဲ့ ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ် အတွက် အနည်းငယ် စိတ်အေး စရာ ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှ မှတ်သားဖွယ် အချက်5ချက်ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ် ။
(1) မာရှယ်နဲ့ အတူ ပုိုကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေကို မျှော်လင့်နိုင်ခွင့် ရှိနေမယ့် ဆိုးလ်ရှား
ဒဏ်ရာ မှ ပြန်လည် သက်သာ ကောင်းမွန် လာ ခဲ့တဲ့ မာရှယ် ဟာ ယူနိုက်တက် တို့ လီဗာပူး နဲ့ ရင်ဆိုင် ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် မှာ လူစားဝင် ကစားသမား အဖြစ် စတင် ပါဝင်ခွင့် ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီနောက် ပါတီဇန် ဘဲလ်ဂရိတ် အသင်း နဲ့ ပွဲမှာ သူဟာ အသင်း ရဲ့ ပွဲထွက် ကစားသမား အဖြစ် ပါဝင် ခဲ့ပြီး ပင်နယ်တီ မှ တစ်ဆင့် အသင်း အတွက် တစ်လုံး တည်းသော အနိုင်ဂိုး ကို တည်တည် ငြိမ်ငြိမ် ကန်သွင်း သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီနေ့ ပွဲစဉ် မှာတော့ ယူနိုက်တက် တို့ လူစုံ နီးပါး ပါဝင် နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် မှာ မာရှယ် ဟာ ပင်နယ်တီ လွဲချော် ခဲ့ပေမယ့် ရဲ့ လုပ်အား တွေနဲ့ ပြိုင်ဖက် ခံစစ် ကို ဒုက္ခ ပေးခဲ့ မှုတွေ အပြင် အနိုင် သေချာ စေမယ့် သွင်းဂိုး က ယူနိုက်တက် အတွက် အရမ်း ကို အရေးပါခဲ့ ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် သူ အသင်း အတွက် ပြန်လည် ပါဝင် ကစားပေး ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် ကတည်းက ယူနိုက်တက် တို့ ဆက်တိုက် ရလဒ် ကောင်းမွန် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
သူဟာ ဒီ ရာသီ မှာ ယူနိုက်တက် အတွက် နံပါတ်9အဖြစ် ကစား ပေးခဲ့ ရ သလို တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား အဖြစ် လည်း ကစား ပေးခဲ့ ရ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို အနေအထား မှာ သူဟာ အသင်း အတွက် အကောင်းဆုံး ကစား ပေးရင်း တိုက်စစ် ကို ပိုကောင်း စေနိုင် ခဲ့ သလို ပြိုင်ဖက် ခံစစ် ကို ဒုက္ခ ပေးရင်း အသင်းဖော် တွေကို လည်း ကူညီ ပေးသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ ရာသီ မာရှယ် နဲ့ အတူ ဆိုးလ်ရှား ဟာ ပိုကောင်း တဲ့ ရလဒ် တွေကို မျှော်လင့် ချင်တယ် ဆို မျှော်လင့် နိုင်ခွင် ရှိနေပြီ လို့ ဆိုလို့ ရနိုင် ပါတယ် ။
(2) ပိုတိုးလာတဲ့ ပင်နယ်တီ ပြသနာ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ဒီ ရာသီ အတွင်း ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲ မှာ ပင်နယ်တီ ကန်သွင်းခွင့်6ကြိမ် အထိ ရရှိ ထားခဲ့ ပြီး4ကြိမ် အထိ တောင် ဂိုး သွင်းယူ နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ ပါဘူး ။ ယခင် တုန်းက ယူနိုက်တက် အတွက် ပင်နယ်တီ ကို ဂိုး အဖြစ် ရာနှုန်းပြည့် ပြောင်းလဲ ပေးနိုင် ခဲ့တဲ့ ရပ်ရ်ှဖို့ ဟာ ဒီရာသီ2ကြိမ် ပင်နယ်တီ လွဲချော် ခဲ့ပြီ ဖြစ်သလို ပေါ့ဂ်ဘာ နဲ့ မာရှယ် တို့ ဟာလည်း တစ်ကြိမ်စီ လွဲချော် ထားခဲ့ ကြ ပါတယ် ။
ဒီနေ့ ပွဲစဉ် မှာတော့ ပင်နယ်တီ လွဲချော် ခဲ့ခြင်း က ယူနိုက်တက် အတွက် အနှုတ် လက္ခဏာ မဖြစ် စေခဲ့ ပေမယ့် ဒါကိုသာ ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် သွင်းယူ နိုင် ခဲ့မယ် ဆိုရင် ယူနိုက်တက် ဟာ လက်ရှိ အချိန် ဒီထက် ပိုကောင်း တဲ့ အမှတ်ပေး ဇယား ရပ်တည် မှု အနေအထား မှာ ရှိနေ ခဲ့မှာ အသေအချာ ပါပဲ ။
ယူနိုက်တက် ရဲ့ မြန်ဆန် တဲ့ တိုက်စစ် ကို ဟန့်တား နိုင်ဖို့ အတွက် ပြိုင်ဖက် အနေ နဲ့ ဖျက်ထုတ်မှု တွေ မလွဲမသွေ ပြုလုပ် ရမှာ ပါပဲ ။ အဲဒီ အခါ တွေမှာ ဖျက်ထုတ် မှု မသေသပ် တာတွေ ပါဝင် လာမှာ လည်း အသေအချာ ပါပဲ ။ ဒါကြောင့် ယူနိုက်တက် ဟာ ဒီ ကစားသမား တွေကြောင့် အနာဂတ် မှာ ပင်နယ်တီ တွေကို ဆက်လက် ရရှိ ဦးမှာ ပါ ။ ဒီ တာဝန် ကို အကောင်းဆုံး ယူနိုင်မယ့် သူက ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ကို ဆိုးလ်ရှား ရှာဖွေ သင့်နေ ပါပြီ ။
(3) အထင်ကြီးဖွယ် ကောင်းခဲ့တဲ့ အာရွန်
နောဝှစ်ခ်ျအသင်းဟာ ရလဒ် တွေ ဆိုးရွား နေခဲ့ ပါတယ် ။ တန်းဆင်းဇုန် ထဲတောင် ရောက်ရှိ နေခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလန် U 21 ကစားသမား လေး မက်စ် အာရွန် ရဲ့ ခြေစွမ်း ကတော့ အထင်ကြီး ဖွယ်ရာ ပါပဲ ။ သူရဲ့ ခြေစွမ်း တွေက တစ်ဆင့် ထပ်တက် နေခဲ့ ပါပြီ ။ လက်ရှိ အချိန် မှာတော့ သူဟာ ခံစစ် အကောင်းဆုံး ကစား နိုင်ဖို့ တော့ ဆက်လက် သင်ယူ ရပါ ဦးမယ် ။
ဒါပေမယ့် သူ တိုက်စစ် ကို လိုက်ပါ ကစား ပေးခြင်း က အသင်းဖော် တွေ အတွက် အရမ်း ကို အထောက် အကူ ဖြစ်စေ ခဲ့ပါတယ် ။ သူဟာ ပွဲချိန် နှစ်ပိုင်း အတွင်း မှာ အသင်း အတွက် ကောင်းမွန် လွန်းတဲ့ အခွင့်အရေး ဖန်တီးမှု2ကြိမ် အထိ ပြုလုပ် သွားခဲ့ သလို ဘောလုံး ပေးပို့ ရာမှာ လည်း ဥာဏ်လွှား သုံးပြ ခဲ့ သလို သေသပ် မှုလည်း ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တိုက်စစ်ပိုင်း ဂိုးသွင်း မသေချာ ခဲ့မှုက သူ့ရဲ့ လုပ်အား တွေကို ထင်ပေါ် သင့် သလောက် မထင်ပေါ် စေခဲ့ ပါဘူး ။
ပွဲစဉ် အတွင်း အာရွန် ကို ဟန့်တား ဖို့ မကြာခန အခက် ကြုံခဲ့ ရ သလို မလိုအပ်တဲ့ ဖျက်ထုတ် မှု အတွက် အဝါကဒ် ပါ ရရှိ ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူ အက်ရ်ှလေယန်း ကတော့ ဒီ ပွဲစဉ် အနိုင် ရလဒ် နဲ့ အတူ ကုန်ဆုံး သွားခဲ့ ရတာ ကို ပျော်ရွှင် နေမှာ အသေအချာ ပါပဲ ။ ထိန်းချုပ် ဟန့်တားရ ခက်ခဲတဲ့ ပြိုင်ဖက် ကို အချိန် ကြာမြင့်စွာ ရင်ဆိုင် ရခြင်း က နောက်ခံလူ တွေ အတွက် အိပ်မက်ဆိုး တစ်ခု ပဲလေ ။
(4) ခြေစွမ်း နောက်တစ်ဆင့် တက်ရောက် ကြပြီ ဖြစ်တဲ့ တော်မီနေး နဲ့ ဂျိမ်းစ်
အကယ်လို့ ယူနိုက်တက် သာ လူငယ် စီမံကိန်း တစ်ခု ကို သေချာပေါက် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် နေတာ ဆိုရင် အသင်း ရဲ့ အခြား လူငယ် တွေ အနေ နဲ့ တော်မီနေး နဲ့ ဂျိမ်းစ် တို့ကို အတုယူ သင့် ပါတယ် ။ ဒီနေ့ ပွဲစဉ် မှာလည်း ဆိုးလ်ရှား ရဲ့ ယုံကြည်မှု တွေကို ဘာကြောင့် ရရှိ နေကြ သလဲ ဆိုတာ ကို သူတို့ တွေက ပြသ ထားခဲ့ ကြတယ် လေ ။
အထူးသဖြင့် စကော့တလန် လက်ရွေးစင် ဟာ ဒီ ရာသီ အတွင်း ယူနိုက်တက် အတွက် ပွဲစဉ် တိုင်း ထူးခြား ကောင်းမွန် လွန်းခဲ့ပြီး ကွင်းလယ် ခံစစ် ကစားသမား တွေကို ဆုံးရှုံး ထားတယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက် တွေကို ယူနိုက်တက် ပရိသတ် တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှ ဆွဲထုက် ထားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီနေ့ လည်း သူဟာ အသင်း ရဲ့ ကွင်းလယ် မှာ ဘောလုံး ကိုင် ကစားတာ အရမ်း ကို သေသပ် ကောင်းမွန် ခဲ့ သလို အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ကိုလည်း အထောက်အပံ့ ကောင်းတွေ ပေးသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်တိုင် လည်း အသင်း အတွက် အရေးပါလွန်း လှတဲ့ ဦးဆောင် ဂိုးကို ကိုယ်တိုင် သွင်းယူ သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ဂျိမ်းစ် ကတော့ ညာ တောင်ပံ အတွက် ကစား ပေးဖို့ ယူနိုက်တက် ဆီ ရောက်ရှိ လာခဲ့ ပေမယ့် ဘယ် တောင်ပံ မှာ ကစား တာ ပိုကောင်း ကြောင်း ပြသ သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ အခုတော့ သူဟာ ညာ တောင်ပံ ပြန်လည် ကစား ပေးနေ ရပြီး ကောင်းမွန် တဲ့ လုပ်အား နှုန်းတွေ ၊ သွက်လက် မြန်ဆန် မှု တွေနဲ့ အတူ အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ကို ပံ့ပိုး ပေးရင်း ပြိုင်ဖက် ခံစစ် ကစားသမားတွေ ကို အထူး ဒုက္ခ ပေးထား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
သူဟာ ယူနိုက်တက် ကို စတင် ရောက်ရှိ ကတည်းက အရံ ကစားသမား အဖြစ် သာ ပါဝင် ခွင့် ရရှိ လိမ့်မယ် လို့ ထင်ကြေး ပေးထား ခံခဲ့ ရသူ ပါ ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အသင်း မှာ ပုံမှန် ပွဲထွက် ကစား ခွင့် တွေကို တော်မီနေး ၊ မက်ဂွားယား နဲ့ ဒီဂီယာ တို့ နည်းတူ ရယူ ထားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ အသင်း သစ် တစ်ခု ကို ရောက်ရှိ လာတဲ့ အတွေ့အကြုံ နည်းသူ လူငယ် ကစားသမား တစ်ယောက် ဆီက အချိန် နဲ့ အမျှ ဒီထက် ပိုပြီး ကောင်းမွန် တဲ့ အရာ တွေကို ရရှိ နိုင် ဦးမယ် ဆိုတာ သေချာ လှ ပါတယ် ။
(5) ” 2000 ” … ကျော်လိုက် ပါပြီ !!!
ဒီနေ့ ပွဲစဉ် မှာ ယူနိုက်တက် အတွက် အဖွင့် ဂိုး သွင်းယူ ပေးလိုက် တဲ့ စကော့ မက် တော်မီနေး ဟာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ သမိုင်း တစ်လျောက် 2000 အကြိမ် မြောက် ပရီးမီးယား လိဂ် သွင်းဂိုး ကို သွင်းယူ ပေးလိုက်ပြီ ဆိုတဲ့ သမိုင်းဝင် မှတ်တမ်း ကောင်း တစ်ခု ကို ကားရိုး ရုတ်ဒ် ကွင်းမှာ ရေးထိုး သွားနိုင် ခဲ့ ပါပြီ ။
အဆိုပါ သွင်းဂိုး ကြောင့် ယူနိုက်တက် ဟာ ဒီ ပြိုင်ပွဲ မှာ သွင်းဂိုး 2000 ပြည့်မြောက် သွားတဲ့ ပထမဆုံး ကလပ် အသင်း တစ်ခု ဖြစ်သွား ခဲ့ ပါပြီ ။ စံချိန်တွေ မှတ်တမ်း ကောင်းတွေ ဆိုတာ ကစားသမား တိုင်း လိုချင် ကြတဲ့ အရာ တစ်ခု ပါပဲ ။ အထူးသဖြင့် ယူနိုက်တက် လို အသင်း မှာ ကစား နေတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး က ဒီလို အသင်း အတွက် မှတ်တမ်း တစ်ခု ရေးထိုး နိုင်ဖို့ ပိုပြီး စိတ်အား ထက်သန် နေမှာ အသေအချာ ပါပဲ ။ အခုတော့ တော်မီနေး ဟာ စံချိန် တစ်ခု ကို ရယူ ရင်း ယူနိုက်တက် ရဲ့ သမိုင်းဝင် လူသား ဖြစ်လာ ခဲ့ ပါပြီ ။